H.E. Daw Ei Ei Khin Aye Presents Credentials to President of Indonesia – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
Daw Ei Ei Khin Aye, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Union of Myanmar to the Republic of Indonesia, presented her Credentials to His Excellency Mr. Joko Widodo, President of the Republic of Indonesia on 12 September 2017, in Jakarta.
Ministry of Foreign Affairs Nay Pyi Taw Dated. 16 September 2017
သံအမတ်ကြီး ဒေါ်အိအိခင်ဧ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ သမ္မတထံ ခန့်အပ်လွှာပေးအပ်
အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန် လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် သံအမတ်ကြီး ဒေါ်အိအိခင်ဧ သည် ၄င်း၏ ခန့်အပ်လွှာကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၂ ရက်နေ့တွင် ဂျကာတာမြို့၌ အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတနိုင်ငံ သမ္မတ မစ္စတာ ဂျိုကို ဝီဒိုဒို ထံ ပေးအပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၆ ရက်